ဘ၀ဆက်တိုင်း…… | မေတ္တာရိပ်
← ဇနီးကျင့်ဝတ် (၅) ပါး
“ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ” →
Posted on April 24, 2013	by mettayate
လောကမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လက်ထက်ထိမ်းမြားကြားတဲ့အခါ ဘဝတစ်လျှောက် ခရီှးရှည်ကြီး သွားရတဲ့အခါ အချင်းချင်း အတွဲညီဖို့လိုပါတယ်။ ယခုဘဝမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံ လိုတယ်။ နောင်ဘဝတစ်လျှောက်မှာလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုတယ်။သံသရာတစ်လျှောက် ဘဝများစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး အဆုံးဘဝထိလက်တွဲပြီး နိဗ္ဗာန်စံဝင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနီးမောင်နှံများအတွက် အောက်ပါအချက်လေးများကို ဂရုတစိုက် အလေးအနက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာ အတွဲအားဖြင့် လေးတွဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့
ဆိုလိုတာက ယောင်္ကျားဖြစ်သူကသီလမရှိဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူး၊ သဒ္ဓါတရားမရှိသလို မိန်းမဖြစ်သူကလည်း သီလမရှိ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်း၊ သဒ္ဓါတရားမရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံအတွဲကို လူသေယောင်္ကျားနှင့် လူသေမိန်းမအတွဲလို့ဆိုလိုတာပါ။
မိန်းမကသီလရှိတယ်။ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတယ်။ သဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်။ သမာဓိရှိတယ်။ ပညာရှိ တယ်။ ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူက သီလမရှိဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူး၊ သဒ္ဓါတရားမွဲတယ်။သမာဓိ မရှိဘူး၊ ပညာဆိုတာလည်း မရှိဘူးဆိုရင် နတ်သမီးမိန်းမနှင့် လူသေယောင်္ကျားအတွဲဖြစ်ပါတယ်။အတွဲမညီ ပါဘူး။ ပထမအတွဲကလည်း မကောင်းတဲ့အတွဲဖြစ်ပါတယ်။
ယောင်္ကျားဘက်ကကောင်းတယ်။ သီလရှိတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတယ်။သဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်။ သမာဓိ ကောင်းတယ်။ ပညာရှိတယ်။ ဒါကိုနတ်သားနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတာပါ။မိန်းမလုပ်သူက သီလမရှိဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူး။သမာဓိမရှိဘူး၊ပညာမဲ့တယ်။ဒီလိုအတွဲမျိုးကလည်း အတွဲမညီပြန်ပါဘူး။ ဒီအတွဲကိုယောင်္ကျားဘက်ကကောင်းပြီး မိန်းမဘက်က မကောင်းလို့ နတ်သားယောင်္ကျားနှင့် လူသေမိန်းမ အတွဲလို့ဆိုတာပါ။
ဒီအတွဲကတော့ အကောင်းဆုံးအတွဲပဲ။ ယောင်္ကျားကလည်းသီလရှိတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတယ်။ သမာဓိရှိတယ်။ ပညာရှိတယ်။ သဒ္ဓါတရားရှိသလို၊ မိန်းမဖြစ်သူကလည်း သီလရှိတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းတယ်။ သမာဓိရှိတယ်။ ပညာရှိတယ်။ သဒ္ဓါတရားရှိတယ်။အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လူတိုင်းလူတိုင်း စံနမူနာယူပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အတွဲဖြစ်ပါတယ်။အတွဲညီညီနဲ့ ကောင်းတဲ့သူအချင်းချင်း၊ သူတော်ကောင်း အဖြစ်ဖြင့် ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ကျင့်ပြီးတော့ မေတ္တာ ၊ကရုဏာတွေ နားလည်မှုတွေထားပြီးပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ မသာယာဖွယ် မရှိပါဘူး။ သာယာမှာပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မှတ်သားလိုက်နာထိုက်တဲ့ ဝတ္ထုကြောင်းတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဘဂ္ဂတိုင်း သံသုမာရဂိရိဆိုတဲ့မြို့မှာ သီးတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အခါ အဲဒီမြို့မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သားအရင်းကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ နကုလပိတာနဲ့ နကုလမာတာဆိုတဲ့ ဒကာကြီး ဒကာမကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ကိုပထမဆုံးတွေ့ဆုံချိန်မှာပင် သောတာပန်များ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ဘဝများစွာ အမျိုးတော်စပ်ခဲ့တာ၊ ဘဝများစွာ အတူနေရခဲ့ကြရသောကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ အလွန်ပင်အကျွမ်းဝင်သောကြောင့် အကျွမ်းဝင်တဲ့နေရာမှာ ဧတဒဂ်အရာဖြင့် မြှောက်စားခံရတဲ့ ဒကာကြီး နဲ့ ဒကာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် မြို့ထဲကို ဆွမ်းခံကြွတော့ ထိုဒကာကြီး ဒကာမကြီးအိမ်ကိုလည်း ကြွပါတယ်။ ခင်းထားတဲ့နေရာမြတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုင်တော်မူနေတုန်း ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးက ရိုသေစွာရှိခိုးပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ နကုလပိတာဆိုတဲ့ ဒကာကြီးက လျှောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင် တပည့်တော်မှာ ဟောဒီနကုလမာတာဒကာမကြီးကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တည်းက ထိမ်းမြားပြီး ပေါင်းသင်းခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။တပည့်တော်ဟာ နကုလမာတာကို ထိမ်းမြားသောအခါမှစ၍ အခြားသူတစ်ယောက် ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်မဆိုထားဘိ၊ စိတ်နှင့်မျှ မပြစ်မှားမိပါ။ နကုလမာတာကို ယခုဘဝမှာလည်း အမြဲ ကြည့်နေချင် ပေါင်းသင်းလိုပြီး သံသရာမှာလဲ အတူတူပေါင်းသင်းလိုပါတယ်ဘုရား။
ထိုစကားကို နကုလမာတာ ကြားလျှင် အားကျမခံ သူ့စိတ်ရင်းကိုလျှောက်သည်မှာ တပည့်မသည်လည်း ငယ်စဉ်အခါကပင် နကုလပိတာ၏ အိမ်သို့လိုက်ပါခဲ့ရပါသည်။ ထိုအခါမှစ၍ အခြားသူကိုစိတ်မျှ မကူးမိပါ။ နကုလပိတာကို ယခုဘဝမှာလည်း အမြဲကြည့်နေချင် သံသရာမှာလည်း အမြဲတွေ့မြင်လိုပါသည်။
ထိုခင်ပွန်း ဇနီးနှစ်ဦးတို့ရဲ့ စကားကို ဘုရားရှင်က ပြန်လည်မိန့်တော်မူတာက ယခုဘဝမှာ စိတ်တူသဘောတူ ကြည်ဖြူ ကြသော ဇနီးခင်ပွန်း တို့သည် နောက်နောင်ဘဝ၌ မကွဲမကွာ ဖြစ်လိုကြလျှင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာတို့ အရာရာ တူစေကြရမည်။
သဒ္ဓါဆိုတာ ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ မိဘ ဆရာသမားများ၏ဂုဏ်များကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီး ကျေးဇူးသိတတ်စွာဆပ်ရခြင်းစတဲ့ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံစေရမှာပါ။ ဒီသဒ္ဓါတရားက အင်မတန်မှ ဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရတနာသုံးပါးဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် ဘာသာတူသူ လူမျိုးတူအချင်းချင်းပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မိမိက ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပြီး ရတနာသုံးနဲ့ မိဘ၊ ဆရာသမားများကို ကြည်ညိုလေးစားသော်လည်း မိမိနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူက ဘာသာခြား ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်သလို သာယာဖြောင့်ဖြူးခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် သဒ္ဓါတရားချင်း တူသူချင်း သာပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာသာတူသူနဲ့သာ ပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါက ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပဲ မြတ်စွာဘုရား တရားတော်အရ အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်သီလပါ။ ဒါလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်။ မိမိကသီလရှိပြီး မိမိနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူက သီမကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပြန်ဘူး။ အိမ်သားက သီလလုံခြုံပြီး အိမ်သူက ကာမေသုမိစ္ဆာစာရစတဲ့သီလတွေ ဖောက်ပြားနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်က သီလရှိသလို အိမ်သူကလည်း သီလရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာဂကျပြန်တော့လည်း တူရဦးမှာပါ။ စာဂဆိုတာ လှူဒါန်းခြင်း ပေးကမ်းခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။ တစ်ယောက်က လှူဒါန်းမှုပြုလျှင် တစ်ယောက်က ကြည်ဖြူရပါမယ်။ မပိတ်ပင်ရဘူး၊ မတားမြစ်ရဘူး၊ မကြည်မဖြူမဖြစ်ရဘူး၊ “မယ်ကလှူမူ မောင်ကြည်ဖြူ မောင်ကလှူဒါန်း မယ်ရွှင်လန်း” ဖြစ်ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်က ပညာ ပါ။ ပညာချင်းတူရမှာပါ။ လောကီပညာမှစ၍ အရာရာ စဉ်းစားချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာ နောက်ဆုံးဝိပဿနာ ပညာထိတူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလေးချက်နဲ့ ယောင်္ကျားနှင့်မိန်းမ တူညီမည်ဆိုလျှင် ယခုဘဝမှာလည်း မခွဲမခွာ သာသာယာယာ ပေါင်းသင်းရမည်ဖြစ်သလို၊ နောင်ဘဝအဆက်ဆက်မှာလည်း အတူတူပေါင်းသင်း ရမည်ဖြစ်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူပါတယ်။ ဒီဒေသနာတော်ကို သတိထား ဂရုစိုက်ပြီး တစ်ယောက်တစ်ယောက် ယခုဘဝမှာလည်း နတ်သား နတ်သမီးနဲ့တူတဲ့ လင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါင်းသင်းနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ယုံကြည်မှု(သဒ္ဓါ)၊ကိုယ်၊နှုတ်နှစ်ပါး လုံခြုံစောင့်ထိန်းမှု(သီလ)၊ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း(စာဂ)နဲ့ အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့(ပညာ) ဒီလေးပါးကိုလက်ကိုင်ထားနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းမှု ပြုလိုက်ရပါသည်။
မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in လောကနိတိ. Bookmark the permalink.
မဟာသတိပဋ္ဌာန် ၄ ပါးနှင့် အကျိုး